Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Ukuqaliswa kwe-IMEX yaseMelika: Amandla amatsha kunye noBumbano
Kwaye sihamba-uSuku loku-1 IMEX eMelika.
Uluntu lweziganeko zoshishino lwehlabathi lubonise amandla ngamanani, ukuhlanganisana kwi-IMEX America, evulwe namhlanje eLas Vegas. Ngaphezulu kwe-3,300 yabathengi behlabathi kunye neenkampani ezibonisayo ezingaphezu kwe-2,250 ezibhalisele ukuya kulo mboniso, oqhubeka ngoNovemba 9 - 11 eMandalay Bay, kwaye zimiselwe ukuhlahlela indlela yokuhlaziywa koshishino.
I-IMEX yaseMelika sisiganeko esibalulekileyo kwishishini leentlanganiso ukuba sisiganeko sokuqala samazwe ngamazwe ukuvula emva kokususwa kwe-ban yase-US.
Umsitho walo nyaka uphawula ishumi leminyaka yemiboniso eyimpumelelo kwaye yeyokuqala kwisithuba seminyaka emi-2 ukusukela ubhubhane.
Umsitho wenzeka kwikhaya labo elitsha eMandalay Bay eLas Vegas, eNevada, eqhuba ukusukela namhlanje ukuya kutsho nge-11 kaNovemba.
Kulo nyaka IMEX Amermna CA, umboniso wokuqala kwisithuba seminyaka emibini, linyathelo elibalulekileyo kweli candelo njengomsitho wokuqala wezizwe ngezizwe ovulwe emva kokususwa kwesithintelo sokuhamba sase-US. Lo mboniso unekhaya elitsha, iMandalay Bay, kwaye ubhiyozela uhlelo lwayo lwe-10, okwenza iintsuku ezimbalwa ezizayo eLas Vegas zibe sisiganeko esikhethekileyo.
Ukwenza ishishini kuhlala kumbindi womboniso kwaye kulo nyaka kuyafana nesibini kwisithathu sokuqeshwa okukhoyo okwenziwe ngenjongo yophando okanye ukuxoxa ngesiganeko esithile - uphawu olucacileyo lokuba abathengi baceba kwangaphambili ngenjongo yokuqalisa ishishini kunye ne iliso ku-2022 nangaphaya.
Komnye umqondiso wokuzithemba kweli candelo, iinkampani ezibonisayo eziyi-2,250+ zinokufikelela kwihlabathi liphela, ezithatha kumazwe angaphezu kwama-200 anabameli abavela eYurophu, eLatin America naseAsia ehleli ecaleni koMntla Melika ukunqumla umgangatho wokubonisa (zonke ziyi-400,000 sq ft zayo!) .
Ye ababonisi ababuyayo, I-16% ityale imali kwindawo enkulu kumboniso - abanye, kuquka iBaltimore, EventsAir, Boise kunye neSt Louis, baye bandisa indawo yabo yokuma nge-100% okanye ngaphezulu xa kuthelekiswa nomboniso wangaphambili kwi-2019.
Wamkelekile kwiIMEX America.
Kulo nyaka umboniso wamkela ababonisi abatsha abavela kulo lonke indawo, ihotele kunye namacandelo ezobuchwepheshe ukusuka ku-A ukuya (phantse) Z kuquka: Amadeus River Cruises, Hopin, Louisiana, MeetingPlay, Minneapolis, Iberostar Hotel & Resorts kunye neVenuIQ. Indawo yeTekhnoloji ezinikeleyo yomboniso yeyona inkulu, ibonisa imfuno ekhulayo yecandelo, kunye notyalo-mali, kwitekhnoloji yomsitho.
UCarina Bauer, i-CEO yeQela le-IMEX, uthi: “Sigqibele ukubamba umboniso kwiminyaka emibini edlulileyo kwaye sisungula namhlanje ngoluhlu lwehlabathi lababonisi kunye nabathengi, ngaphezulu kweeseshoni zemfundo ezingama-200, kunye nendawo entsha. Ukuthi ndichulumancile kukungabinangqondo!
“Emva kweminyaka eli-10 iLas Vegas ifana nekhaya lesibini, kwaye ndiyazi ukuba luluvo oluya kwabelwana ngalo ngamawakawaka abantu ekuhlaleni kule veki. Kwabo bethu baphila kwaye baphefumle iintlanganiso, iminyhadala kunye nohambo lwenkuthazo kuyamangalisa ukubona ishishini lethu libuyela ebomini.
“Amanani, ukuqeshwa kunye nezivumelwano zeshishini ecaleni, ndiqinisekile ukuba siza kujonga emva kolu hlelo lwe-10 lwe-IMEX yaseMelika njengendawo yokucofa kwishishini. Idijithali kunye ne-hybrid ngokucacileyo zinendawo yazo, kodwa akukho nto idlula loo mvakalelo ye-visceral yokuba kumgangatho wokubonisa amaqabane, abathengi kunye nababoneleli abavela kwihlabathi lonke kwaye ukwazi okukhokelela ngqo ekudalweni kwemisebenzi, uphuhliso lobuchwephesha, ukuqhubela phambili kweshishini kunye neyona nto ibalulekileyo kuzo zonke. , impembelelo entle kwezoqoqosho ehlabathini lonke.”
I-IMEX yaseMelika iyaqhubeka kude kube ngoNovemba 11.